Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Zocingo » Ukunciphisa Ukusabalala Kwesifo Esiwubhubhane Manje
Isibalo sabantu abangenwe ukwahluka kwe-Omicron ye-COVID-19 sephule amarekhodi kusukela kuqale unyaka omusha. Ngenxa yegagasi elisha, izinsiza zokuhlola ziyashoda.
Ngokuka-Anthony S. Fauci, Umeluleki Omkhulu Wezokwelapha kuMongameli Biden, kuzoba kubaluleke kakhulu “ukuthi sithole amandla amakhulu okuhlola, ikakhulukazi lapho isidingo sokuhlolwa siphezulu kakhulu, nenhlanganisela yokwahluka kwe-Omicron uqobo, kanye nenkathi yamaholide, lapho abantu befuna ukuthola lelo zinga elengeziwe lokuqinisekisa ukuthi bavikelekile, ngisho noma ugonyiwe futhi uthuthukisiwe.” Kuleli sonto, uhulumeni uphendule ngokwethula iwebhusayithi lapho abantu baseMelika bengacela khona ukuhlolwa kwamahhala kwe-COVID-19 ekhaya. Todos Medical Ltd., Moderna, Inc., Pfizer Inc., Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Vaxart, Inc.
Khonamanjalo, eNew York, okuphinde kube yimbangela yalolu bhubhane e-US, kumenyezelwe ukuthi izikhulu zedolobha zixoxisana ngokubuyela kwesikhashana ekufundeni okude kwamashumi ezinkulungwane zabafundi abangezi ekilasini. “Ukuhlaziywa kwangempela okukhombisa ukuthi besisendleleni efanele. Izingane ebezisekhaya zibe nokukhuphuka okungu-15% noma amathuba okuvezwa. Bheka ukuthi ibithini inombolo uma besesikoleni. Iphesenti elilodwa,” kuchaza iMeya u-Eric Adams.
I-Todos Medical Ltd. isanda kumemezela izindaba ezisematheni zokuthi, “Ngokusebenzisana neKomidi Lokusingatha I-NFL, I-Celebrity Sweat®, uhlobo lwempilo yosaziwayo engu-#1 lubuyile ne-22nd Annual Celebrity Flag Football Challenge® eyethulwe yi-Todos Medical's Tollovid®, ngoMgqibelo, February. 12, 2022, 1:00 PM – 3:00 PM PST, e-Malibu at Pepperdine University Soccer Field (Ngaphandle). Iminyango ivulwa ngo-11:15 AM PST iqala ngendawo yomdlalo esebenzisanayo, enikeza imisebenzi, imiklomelo, izipho kanye nokudla. Kuzophinde kube nombukiso othokozisayo wesikhathi sekhefu.
I-Celebrity Flag Football Challenge®, eyethulwa yi-Todos Medical's Tollovid®, iwumcimbi ojabulisa umndeni, ovuleleke kubalandeli bayo yonke iminyaka. Abasubathi abangu-XNUMX nosaziwayo bazodlala kumdlalo webhola lezinyawo wokuncintisana futhi Abaphenduli Bokuqala, Amalungu Enkonzo Yezempi, Namaqembu Entsha Yabafana Namantombazane asuka kulo lonke elaseCalifornia amenywe njengezihambeli ezikhethekile. Umdlalo Webhola Losaziwayo Wefulegi Losaziwayo ubuwumcimbi obalulekile kule minyaka engamashumi amabili nambili edlule. Kulo nyaka kuzoba impinda yomdlalo wangonyaka odlule futhi kuzobe kukhona inkakha yeNFL Quarterback uDoug Flutie ebhekana neNBA Hall of Famer Tracy McGrady, neNFL Hall of Famers u-Andre Reed noMichael Irvin njengokaputeni abambisene nabo. Abadlali bangaphambili be-NFL nabasakazi bemakethe yezezimali, uJon noPete Najarian bazoba ngokaputeni abadumile, abamele umndeni wakwaTodos Medical.
Abanye osaziwayo nabasubathi okwamanje abahlelelwe ukubamba iqhaza bahlanganisa u-Anthony Anderson, Tory Lanez, Devin Hester, Wale, LaDainian Tomlinson, Reggie Bush, Anthony Pettis, Sergio Pettis, nabanye. I-Bally Sports West izosakaza umdlalo BUKHOMA kumabonakude kusukela ngo-1:00 PM - 3:00 PM PST futhi uzakwethu wethu womsakazo, i-iHeartRadio, naye uzobe ewuphromotha umcimbi.
I-Celebrity Sweat iyaziqhenya ngokuletha lo mcimbi womphakathi othengekayo wokuzijabulisa, ukudla, nokuzijabulisa kubalandeli bedolobha lasekhaya laseMalibu, imiphakathi ezungezile, kanye nabashisekeli bezemidlalo abavakashelayo abavela emhlabeni wonke.
I-Rome Ihlangabezana Nezinselelo Zokubuyisela Ezokuvakasha...
I-Lufthansa Group: Isiminyaminya sethu sezindiza sizothola...